महिला हिंसाको चढ्दो ग्राफ, सम्बोधन गर्ने निकाय महिला आयोग नै पदाधिकारीविहीन ! – Everest Dainik – News from Nepal
महिला हिंसाको चढ्दो ग्राफ, सम्बोधन गर्ने निकाय महिला आयोग नै पदाधिकारीविहीन !
महिलाको हकहित र समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने काम गर्दैआएको राष्ट्रिय महिला आयोग एकवर्षदेखि पदाधिकारीविहीन बनेको छ । नेपालको संविधान जारी भएसँगै संवैधानिक निकायको हैसियत पाएको यो आयोग एक वर्षअघिदेखि पदाधिकारीविहीन छ ।
कानूनअनुसार महिला आयोगमा अध्यक्षसहित पाँचजना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । गत असोज २८ गतेसम्म भगवती घिमिरे आयोगको कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा एक्लो पदाधिकारी थिइन् । उनको कार्यकाल सकिएको एकवर्ष बितिसक्दा पनि आयोगले नेतृत्व पाउन सकेको छैन् ।
आयोगका सचिव अनिलकुमार ठाकुरले पदाधिकारीहरु बहाल नरहे पनि आएका उजुरीलगायतका सम्पूर्ण काम गरिरहेको तर, नीति निर्माण तहमा समस्या भएको बताए । आयोगका अध्यक्ष शेष चाँदताराको २०७२ कात्तिक २७ मा पदावधि सकियो ।
त्यसपछि कार्यवाहक अध्यक्ष मनु हुमागाईंले सदस्य द्वय धनेश्वरी कुमारी चौधरी र उर्मिलादेवी विश्वकर्माको सहयोगमा आयोग सम्हालेकि थिइन् । यो टोलीको पदावधि २०७२ चैत ५ गते सकियो । आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीको २०७१ साल जेठ १८ मा पदावधि सकिएको थियो ।
राणाका अनुसार मुलुकमा बढिरहेको महिला हिंसाका घटनाहरुको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन । महिलासम्बन्धी गरिएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि परिपालनाको अनुगमन पनि भएको छैन । राणाले थपिन्, “संविधानले संवैधानिक आयोग बनाएको छ । नीति बनाएर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयन ठूलो कुरा हो ।”
महिला आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा महिला अधिकारको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काम ओझेलमा परेको छ । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या, रौटहत चन्द्रनिगाहपुरकी सम्झना दासको एसिड आक्रमणबाट हत्यालगायत दजनौं दर्दनाक घटनाहरु भएका छन् । हिजोआज महिला हिंसाका घटना एकपछि अर्को बाहिर आइरहेका छन् । पदाधिकारी नहुँदा यस्ता घटनाको सत्यतथ्य बुझ्ने, अनुगमन र निरीक्षण गर्ने काम हुन सकेको छैन ।
महिला अधिकारकर्मी डा. रेणू अधिकारी भन्छिन, “महिला हकअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय महिला आयोगमा लामो समयसम्म पदाधिकारी नहुनु भनेको महिलाको मुद्दाप्रति राज्यबाट उपेक्षा हुनु हो ।”
“आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान भई नाम सङ्कलन भइसकेको छ, संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ, बैठक बसेपछि पदाधिकारी नियुक्ति हुन्छ” – उनले भने ।
देशको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेका महिलालाई देश विकासको मूलप्रवाहमा सक्रिय बनाउने उद्देश्यले तत्कालीन श्री ५ को सरकारले ९२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा विसं २०५८ फागुन २३ गते डा. दुर्गा पोखरेलको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय महिला आयोग गठन गरेको थियो ।
योग्यताको हकमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्त हुनेले कम्तीमा १० वर्ष महिलाको हकहित वा लैंगिक न्याय वा महिला विकास वा मानव अधिकार र कानूनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको हुनुपर्नेछ ।
ट्याग्स: Women Commission